स्वास्थ्य/ज्ञान – Page 20 – आइसिटी खबर:सूचना सञ्चार तथा प्रविधि खबर ICT Khabar.com : No.1 Tech INFO ICT News Site
Home / स्वास्थ्य/ज्ञान (page 20)
चाणक्यका यी १० कुरालार्इ पालना गर्दा जीवन शुखी र खुशी बन्छ
March 15, 2016	स्वास्थ्य/ज्ञान0944
चाणक्य नीति १ः आफूले सोचेको कुरालाई व्यक्त हुन नदिनुहोस् । वुद्धिमान मानिसले आफ्नो योजना बारे कसैलाई पनि बताउँदैन ।आफूले सोचेको कुरालाई पुरा गर्नको लागि ढृढ रहनुहोस्, तपाईंको जीत अवश्य हुनेछ । चाणक्स नीति २ः शिक्षा सबैभन्दा राम्रो मित्र हो । एक शिक्षित व्यक्तिले हरेक ठाउँमा सम्मान पाउँछन् । शिक्षाले सौन्दर्य ...
एउटै गोरुले सबै खेत जोत्छन् ताप्लेजुङका पारस बराल
March 14, 2016	स्वास्थ्य/ज्ञान0804
रविन भट्टराई÷ताप्लेजुङ एउटा छोरो घर बाँझो, एउटा गोरु हल बाँझो भन्ने उखानलाई ताप्लेजुङका एक कृषकले चुनौती दिएका छन् । ताप्लेजुङ नगरपालीका आठ साप्तेलका कृषक पारस बरालले पालेको एउटै गोरुले आफ्नो सम्पुर्ण खेत जोत्ने गरेका छन् । घरेलु प्रविधिबाट बनाईएको हलोको माध्यमबाट बरालले एउटै गोरुले अहिले सजिलै खेत जोती रहेको देख्न ...
अमेरिकालाई हाइड्रोजन बमले उडाउने उत्तर कोरियाको हाइड्रोजन बम ब्यालिस्टिक मिसाइल यस्तो
March 14, 2016	स्वास्थ्य/ज्ञान0811
उत्तर कोरियाले अमेरिकाको म्यानहट्टनलाई हाइड्रोजन बमले उडाउने धम्की दिएको छ। वासिंटन पोष्टले उत्तर कोरियाको अफिसियल मिडिया डिपिआरकेलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकाको म्यान हट्टनलाई हाइड्रोजन बमले उडाउने धम्की दिएको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमका अनुसार उत्तरले सो हाइड्रोजन बम ब्यालिस्टिक मिसाइलमार्फत छोड्ने हो भने न्युयोर्कको म्यानहट्टन ध्वस्त हुन्छ भने सबै मानिसको मृत्यु हुनुका ...
के हो ओफुरो ? अफूरो प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यका लागि फाइदै फाइदा
March 14, 2016	आइसिटी टुरजिम, समाज खबर, स्वास्थ्य/ज्ञान01,107
काठमाडौ । मानिसको जीवन निकै व्यस्त छ । खानपान र व्यस्त जीवनका कारण चाहेर पनि मानिस स्वस्थ बन्न सक्दैन । तर यस्ता मानिसलाई स्वस्थ भएर जीवन बरदान दिने पद्धती भनेको ओफुरो हो । विश्वमा यो पद्धती निकै लोकप्रिय र प्रचलनमा भएपनि नेपालीहरुलाई यसविषयमा जानकारी कम छ । तर यो मानिस स्वास्थ्यका ...
विहानै श्रृंगार गरेकी स्त्रीसहित ५ चिज देखियो भने दिन नै शुभ हुन्छ
March 13, 2016	समाज खबर, स्वास्थ्य/ज्ञान0990
भनिन्छ दिनको शुरुवात राम्रो भो भने दिन नै राम्रो हुन्छ । शास्त्रमा यस्ता कुरा उल्लेख छन् जुन कुरा विहान उठ्ने वित्तिकै देखियो भने शुभ र अशुभ हुन्छ । १ श्रृंगार गरेकी स्त्री विहान उठ्ने वित्तिकै श्रृंगार गरेकी महिला देखियो भने दिन शुभ हुन्छ । घरमा उठ्दा रातो बस्त्र लगाएकी स्त्री ...
धर्मशास्त्र अनुसार यी ३ बार कहिल्यै नकाट्नु दारी र कपाल
March 13, 2016	स्वास्थ्य/ज्ञान02,083
धर्मशास्त्रमा जीवनका नियमहरु उल्लेख छन् । त्यसमा दारी र कपाल काट्न नहुने दिन समेत उल्लेख छ । यी दिनमा दारी कपाल काट्दा अशुभ हुने मानिन्छ । यी दिनमा नकाट्नुस् कपाल शास्त्रका अनुसार मंगलवार, विहीवार र शनिवार कपाल काट्नु हुँदैन । यसले अशुभ गराउने विश्वास छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार पनि ...
नामको शुरुको अक्षरबाट थाहा पाउनुहोस् तपाईको प्रेम सम्बन्ध को सँग राम्रो को सँग नराम्रो
March 13, 2016	समाज खबर, स्वास्थ्य/ज्ञान01,640
सबै १२ राशीका स्वभाव अलग अलग हुन्छन् र यी राशीका कारण व्यक्तिका स्वभाव र भविश्य निर्धारण गरिन्छ । राशिको स्वभावका आधारमा हाम्रो सम्बन्ध, दोस्ती, प्रेम प्रसङ्ग पनि निर्भर हुन्छ । आप्mनो नामको शुरुको अक्षरबाट थाहा पाउनु होस् तपाईको प्रेम सम्बन्ध कुन स्त्री या पुरुष सँग कस्तो रहन्छ । १.मेष राशि ...
के हो हाइपो र हाइपर थाइराइडिज्म् ?
March 12, 2016	समाज खबर, स्वास्थ्य/ज्ञान0974
थाइराइड ग्रन्थीको काममा गडबडी भएमा यसले अनावश्यक हर्मोन बढी र आवश्यक हर्मोन कम मात्रामा उत्पादन गर्छ । हर्मोन बढी उत्पादन हुनुलाई हाइपर थाइरोइडिज्म् भनिन्छ भने कम हर्मोन उत्पादन गर्ने कामलाई हाइपो थाइरोडिज्म् भनिन्छ । यो शरीरको आफ्नै कारण (अटो इम्युन) ले हुने रोग हो । यसमा शरीरले एन्टिबडी बनाएर थाइराइडलाई ...
सावधान रहनुहोस् है! दुधको चिया शरीरमा गएर यसरी बन्छ विष
March 12, 2016	समाज खबर, स्वास्थ्य/ज्ञान0954
अरु बेलामा भन्दा जाडो समयमा नेपालीहरु बढी चिया पिउँछन्। अधिकांश मानिसहरुले आनन्दको लागि, शरीर न्यानो गराउनको लागि चिया पिउने गर्छन्। फेरि चियाको (कालो चियाको) स्वास्थ्यमा फाइदाहरू पनि टन्नै छन्। प्राचीन समयमा चीन, भारत र नेपाल लगायत एसियाली भू-भागहरूमा कालो चियालाई औषधीको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गर्दथे। चियामा हाम्रो स्वास्थ्यलाई प्रभाव ...
केटा केटीहरुलाइ लाग्ने टन्सिल कस्तो रोग हो ? यसका लक्षण र यस वाट वच्ने उपायहरु
March 12, 2016	समाज खबर, स्वास्थ्य/ज्ञान01,069
यो प्राय केटा केटीहरुलाइ लाग्ने रोग हो तर जुनसुकै उमेरमा पनि लग्न सक्छ्र घाटी दुखने, थुक निल्दा वा खान खादा अफ्ठयारो हुने , ज्वरो आउने प्राय यो रोगका लक्षण हुन््र टन्सिल लिम्फाइड नामक एक विशेष प्रकारको तन्तुहरुको समूह हो । यो मुखको भित्री भाग जिब्रोको अन्तिम भागतिर एजबचथलह नाकको बीचमा ...